Beautiful Myanmar Places — Steemkr
Beautiful Myanmar Places
babysister42 in beautiful
မြွေမြွတွေဟာ ခြေလက်တွေ မရှိကြတဲ့ အသားစားသတ္တဝါတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြွေတွေဟာ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေ၊ ငှက်တွေ၊ နို့တိုက် သတ္တဝါအကောရပ်ဆဲလ် မြွေပွေး တွ၊ ပင်လယ်မြွေတွေနဲ့ ဩစတြေးလျ တိုက်နေ မြွတွေဟာ ခန္ဓာလမ်းလျှောက်တဲ့ အချိန် ဂရုစိုက်ပါ။ မြွေတွေဟာ လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင် သင် မတက်နင်းသ၍။
မြွေမများမကိုက်တတ်ကြပါဘူး။မြွေကိုက်ခံရဖို့ အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မြွေတွေကို သွားမစဖို့ပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက မြွေတော်တော်များများက ရန်လိုလေ့မရှိဘဲ သူတို့တွေကို ခြိမ်းခြောက်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အချိန်မှာသာ ကိုက်တတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် မြွေအကိုက်ခံရနှုန်းများပြားတဲ့ အချိန်တွေမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အချက်တွေကတော့သတိရှိနေဖို့ အတွက် အရက်သောက်တာကို ရှောင်ရှားပါ။မြွေပေါတဲ့လမ်းတွေမှာ လမ်းလျှောက်ရင် လမ်းလျှောက်တုတ်လေးတစ်ချောင်းဆောက်သွားပါ။
အကယ်၍ လမ်းလျှောမြွေကိုက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာနားတစ်ဝိုက် မရောင်ကိုင်းလာခင် သွေးစီးဆင်းမှုကို နှောင့်ယှက်စေနိုင်တဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ချွတ်ထားပါ။က်တုတ်နဲ့ မြွေကို သွားထိမိမယ်ဆိုရင် ဒီတုတ်ချောင်းကိုသာ မြွေက တိုက်ခိုက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကောင်း။
မြွေထီးတွေချောခချင်းဝတ်နားတစ်ဝိုက် လုံလုံခြုံခြုံရှိစေဖို့ အတွက် လည်ရှည်ဖိနပ်များနဲ့ ဘောင်းဘီရှည်များကို ဝတ်ဆင်ပါ။ညဘက် လမ်းသွားလမ်းလာ လုပ်ဆောင်တဲ့ အခါ မြွေကိုတွေ့ရင် ရှောင်နိုင်စေဖို့ အတွက် လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ သို့ စမတ်ဖုန်းမှမီး အလင်းရောင်ကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုပါ။မြွေတော်တော်များများက လူကသူ့ကိုကြောက်တာထက် မြွေတွေက ပိုကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြွေကို ပြေးဖို့ နေရာပေးခြင်းဖြင့် မြွေကိုက်ခံရခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေတွေနဲ့ အဆိပ်ရှိမှန်း မသိရတဲ့ မြွေတွေကို ဖမ်းဆီးတာမျိုး၊ သွားစတာမျိုး မပြုလုပ်ပါနဲ့။နေထိုင်တဲ့ နေရာက မြွေအန္တရာယ်များတဲ့ နေရာဖြစ်အကုန်မိုက်။
မယ်ဆိုရင် မြွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ထားပြီး အမျိုးအစားခွဲခြားတတ်အောင့် လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။ကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများက ကြွက်သားမြွေဟောက်များနဲ့ အာဖရိကတိုက်မှ မြွေဟောက်နဲ့ တူတဲ့ မြွေများဟာ သူတို့ရဲ့ အဆိပ်တွေကို သားကောင်ရဲ့ မျက်လုံးထဲကို တိတိကျကျ ပစ်လွှတ်နိုင်ပြီး မျက်လုံးနာကျင်ခြင်းနဲ့ ပျက်ဆီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မြွေကိုက်ခံရတဲ့ လူအနေနဲ့ သူကို ကိုက်လိုက်တဲ့ မြွေဟာ အဆိပ်မရှိပါဘူးလို့ ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူက ထောက်ခံတဲ့ အချိန်ကလွဲပြီး ကျန်အချိန်တွေမှာ ဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းသို့ အမြန်သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ အဆိပ်မရှိတဲ့ မြွေတွေ ကိုက်ခံရတဲ့ လူတွေ အနေနဲ့လည်း ဒဏ်ရာကို သေချာဂရုစိုက် ဆေးထည့်ဖို့လို့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း မေးခိုင်ပိုး ကာကွယ်ဆေး မထိုးခဲ့ရသေးဘူး ဆိုရင် မေးခိုင်ပိုးကာကွယ်ဆေးပြန်ထိုးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။အားလုံးအိုကေ။
ဘေိုကေဒါဘိုကေ။မြွကိုက်ခြင်းကို ကုသဖို့ဆိုတာ ဖြစ်စဉ်အပေါ်လုံးဝမူတည်နေပါတယ်။ မြွေမျိုးစိပ်ကို တိတိကျကျ မခွဲခြားနိုင်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးသွားကြတဲ့ လူအရေအတွက်ဟာ များပြားပါတယ်။ မြွေအားလုံးက အဆိပ်မရှိတဲ့အပြင် မြွေဆိပ် အမျိုးမျိုးအတွက် မြွေဆိပ် ဖြေဆေးအမျိုးမျိုးရှိတာကြောင့် ဆေးရုံသွားပြတဲ့ အခါ ကိုက်ခဲ့တဲ့မြွေကို သေချာ ခွဲခြားပြနိုင်ရင် အရမ်းအထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြွေကိုက်ခံရတဲ့ လူအနေနဲ့ သူကို ကိုက်လိုက်တဲ့ မြွေဟာ အဆိပ်မရှိပါဘူးလို့ ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူက ထောက်ခံတဲ့ အချိန်ကလွဲပြီး ကျန်အချိန်တွေမှာ ဆေးရုံအရေးပေါ်ခန်းသို့ အမြန်သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ အဆိပ်မရှိတဲ့ မြွေတွေ ကိုက်ခံရတဲ့ လူတွေ အနေနဲ့လည်း ဒဏ်ရာကို သေချာဂရုစိုက် ဆေးထည့်ဖို့လို့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း မေးခိုင်ပိုး ကာကွယ်ဆေး မထိုးခဲ့ရသေးဘူး ဆိုရင် မေးခိုင်ပိုးကာကွယ်ဆေးပြန်ထိုးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။မင်းလဲဘိုကေငါလဲဘိုကေ။
အားလုံးအေးဆေးမြွဟောက်များနဲ့ အာဖရိကတိုက်မှ မြွေဟောက်နဲ့ တူတဲ့ မြွများဟာ သူတို့ရဲ့ အဆိပ်တွေကို သားကောင်ရဲ့ မျက်လုံးထဲကို တိတိကျကျ ပစ်လွှတ်နိုင်ပြီး မျက်လုံးနာကျင်ခြင်းနဲ့ ပျက်ဆီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ကိုက်တဲ့မြွေက အဆိပ်မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ကိုက်ခံရတဲ့ ဒါဏ်ရာကနေ ပြင်းထန်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တဲ့ မေးခိုင် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်တာကြောင့်ာမြွေကိုက်ကိုက် ဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြသင့်ပါတယ်။အကိုက်ခံရတဲ့ လက်၊ ခြေထောက်ကို အတတ်နိုင်သမျှ မလှုပ်ားပဲနေပါ။ ဒီလို နေခြင်းဖြင့် အဆိပ်များပျံ့နှံ့ခြင်းကို နှေးကွေးစေလာပါလိမ့်မယ်။အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေကိုက်ခံရမယ်ဆို နာကျင်မှုနဲ့ အကိုက်ခံရတဲ့ နေရာနားတစ်ဝိုက် ရောင်ကိုင်းလာခြင်းနဲ့ အရေကြည်ဖုလိုမျိုး ဒဏ်ရာများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး တစ်ရှုးတွေပျက်ဆီးလာနိုင်ပါတယ်။ မြွေကိုက်ခံရတဲ့ အခါမှာ အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေအကိုက်ခံရရင်တောင် ခုအချိန်မှာနွေးထွေး။
ကျုပ်တို့လောကအတွက်..တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဆိပ်မရောက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြွေတွေဟာ အဆိပ်ဘယ်လောက် ထုတ်လွှတ်မလဲဆိုတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး သူတို့ အတွက် အန္တရာယ်အများဆုံးလိုအဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေကိုက်ခံရမယ်ဆို နာကျင်မှုနဲ့ အကိုက်ခံရတဲ့ နေရာနားတစ်ဝိုက် ရောင်ကိုင်းလာခြင်းနဲ့ အရေကြည်ဖုလိုမျိုး ဒဏ်ရာများ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး တစ်ရှုးတွေပျက်ဆီးလာနိုင်ပါတယ်။ မြွေကိုက်ခံရတဲ့ အခါမှာ အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေအကိုက်ခံရရင်တောင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဆိပ်မရောက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြွေတွေဟာ အဆိပ်ဘယ်လောက် ထုတ်လွှတ်မလဲဆိုတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး သူတို့ အတွက် အန္တရာယ်အများဆုံးလို့ ထင်နေတဲ့အချိန် အကိုက်ခံရရင်တော့ ပိုပြီး အဆိပ်ပြင်းပါတယ်။ မြွေဆိပ်မှာဆိုရင် ဓာတု ဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး ဒီအဆိပ်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်လာမယ်ဆိုရင် တစ်ရှုးများကို ပျ
အချိန်နှင့်ဒီရေသည်အဆိပ်ပြမြွေရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကိုမှတ်လာခဲ့ခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်က ဘယ်မြွေကိုက်လိုက်သလဲဆိုတာကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘဒီလို အဆိပ်တွေကို ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလို လုပ်တာက အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပါးစပ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေ ပြည့်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ အက်စပရင်၊ အိုင်ဗျူ ပရိုဖင် နဲ့ တစ်ခြားသော အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးများဟာ သွေးများကို ကျဲစေပြီး သွေးထွက်လွန်စေနိုင်တဲ့ အတွက် ဒီဆေးတွေ မသောက်သင့်ပါဘူး။ယ်ဒေသမှာ အကိုက်ခံရသလဲဆိုတာကလည်း အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။င်းပါတယ်။ မြွေဆိပ်မှာဆိုရင် ဓာတု ဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီး ဒီအဆိပ်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်လာမယ်ဆိုရင် တစ်ရှုးများကို ပျက်ဆီးစေပြီး သွေးခဲစေတဲ့ ပရိုတင်းတွေကို ပျတဲ့ ဒဏ်ရာကို ဆေးကြောခြင်းနဲ့ နောက်ထပ် ဘာအန္တရာယ်မှ မရဘူးဆိုတာ သေချာအောင်လို့ စစ်ဆေးချက်လုပ်ရုံ
က်ဆီးစေပြီး သွေးခဲစေတဲ့ ပရိုတင်းတွေကို ပျက်ဆီးစေစေပါတယ်။ အဆိပ်ပမာဏ အနည်းအများလိုက် ရောင်ကိုင်းခြင်းနဲ့ တစ်ရှုးပျက်ဆီးခြင်းဟာ တစ်နာရီအတွင်း ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မကုသဘဲထားမယ်ဆိုရင် တစ်ရှုးပျက်ဆီးလာကာ ခြေတွေ၊ လက်တွေ ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ့် ထင်နေတဲ့အချိန် အကိုက်ခံရရင်တော့ ပိုပြီးအိုး။က်ဆီးစေစေပါတမြွေကိုက်ခံရင် ဘယ်လို ကုသရမလဲဆိုတာက ဘာမြွေ အကိုက်ခံလိုက်ရလဲဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ သင်ခန္ဓာကိုယ်က မြွေဆိပ်ကို ဘယ်လောက် အထိ တုံ့ပြန်သလဲဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ အဆိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာဆိုရင် အကိုက်ခံရပမာဏ အနည်းအများလိုက် ရောင်ကိုင်းခြင်းနဲ့ တစ်ရှုးပျက်ဆီးခြင်းဟာ တစ်နာရီအတွင်းလူကိုမစောင့်။အပြင် တစ်ခြား ဘာမှကို လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ယ်။ အဆိပ်အကျန်တွေဟာ ကျောက်ကပ်မှာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကိုက်ခံရတဲ့ လက်၊ ခြေထောက်ကို အတတ်နိုင်သမျှ
ရူးမိုက်မိတဲ့ဘ၀ဖစ်လာနိုင်ပြီး မကုသဘဲထားမယ်ကိုက်တဲ့မြွေက အဆိပ်မရှိဘူးဆိုရင်တောင် ကိုက်ခံရတဲ့ ဒါဏ်ရာကနေ ပြင်းထန်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တဲ့ မေးခိုင် ရောဂါ ကူးစက်ခံရနိုင်တာကြောင့် ဘာမြွေကိုက်ကိုက် ဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြသင့်ပါတယ်။လို မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်က အချိန်ဘယ်လောက် ကုန်သွားပြီလဲဆိုတာ သိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကိုက်ခံရတဲ့ လက်၊ ခြေထောက်ကို အတတ်နိုင်သမျှ မလှုပ်ရှားပဲနေပါ။ ဒီလို နေခြင်းဖြင့် အဆိပ်များပျံ့နှံ့ခြင်းကို နှေးကွေးစေလာပါလိမ့်မယ်။ဆိုရင် တစ်ရှုးပျက်ဆီးလာကာ ခြေတွေ၊ လက်တွေ ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဆဲလ်တွေ သေဆုံးခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီကြွက်သားဆဲလ်တွေက အကြွင်းအကျန်တွေဟာ ကျောက်ကပ်မှာ လာရောက်ပိတ်ဆို့နိုင်ပြီး ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။င်ငယ်လေးတွေ၊ တစ်ခြား တွားသွား သတ္တဝါတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ခြားသော မြွေများကိုပါ စားတတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြေိုးဦးကျပိုင်းကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်ဟာ နယ်ဘမြွေတွေဟာ အဆိပ်ကို ထိုးသွင်းဖို့ အတွက် အထူးသီးသန့်ကျောခိုင်းလှည့်ထွက်သွား...။
ပါဝင်တဲ့ တံတွေးဂလင်းတွေကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြွေအဆိပ်ဟာ အထူးသီးသန့်တံတွေးတစ်မျိုးသာဖြစ်ပြီး အစာခြေဖျက်ခြင်းကို ကူညီပေးဖို့ အတွက် ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်များက လက်ခံထားကြပါတယ်။ အဆိပ်ပမာဏ အနည်းအများအလိုက် ထုတ်ခြင်းဟာ သားကောင်ကို သတ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဆိပ်ထုတ်တဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် အဆိပ်များက အဆိပ်ဂလင်းမှ မြွေစွယ်သို့ရောက်သွားပြီး အဲ့ကမှ တစ်ဆင့် သားကောင်ကိုယ်ထဲသို့ ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြွေဆိပ်တွေဟာ ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးမျိုး ပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်း အတိုင်းအတာအလိုက် အဆိပ်ကလည်း အပျော့အပြင်းရှိပါတယ်။ မြွေဆိပ် ပရိုတင်းတွေကို
အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစား ၄မျိုး ခွဲခြားထားနိုင်ပါတယ်။က်တွေနဲ့ လယ်ကွင်းပေါတဲ့ ဒေသတွေမှာ မြွေအများအပြားကို တွေ့ရမယ့် အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိုးဦးကျရာသီ နဲ့ မိုးရာသီမှာဆိုရင် မြွေကိုက်ခံရတဲ့နှုန်းက မြင့်မားလာပါတယ်။ ကုန်းပေါ်မှာရော၊ ပင်လယ်ထဲမှာရော၊ သစ်မြေပွေးများနဲ့ ရေရှည်မှာမကိုက်။
အစွဲအလမ်းကြီးသူမျိုးရင်း မြွေတွေဟာ အတွင်းအင်္ဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အူသိမ်အူမတွေကို သွေးထွက်စေပါတယ်။ အကိုက်ခံရတဲ့ လူအနေနဲ့ အကိုက်ခံထားရတဲ့ ဒဏ်ရာနားကနေ သွေးတွေ ထွက်လာနိုင်သလို ပါးစပ်နဲ့ တစ်ခြားသော အနာဟောင်းတွေကနေလည်း သွေးထွက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။တာတွေထဲမှာရော၊ ရေကန်ထဲမှာရော နေရာအစုံနေတတ်ကြတဲ့ မြွေတွေဟာ နာမည်ကြားတာနဲ့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ကြပေမဲ့ မြွေတော်တော်များများက သင်သူတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ၁ နှစ်အတွင်း မြွေကိုက်မှုပေါင်း ၁.၈မျိုးရင်းမြွေတွေနဲ့ ပင်လယ်နေ မြွေတွေဟာ အာရုံကြော စနစ်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ မြွေဟောက်နဲ့ အာဖရိကတိုက်နေ မမ်ဗာ မြွေတွေဟာ အသက်ရူကြွက်သားများကို ရပ်တန့်စေနိုင်ပြီး အကိုက်ခံရတဲ့လူအနေနဲ့သူ့ထိုက်နဲ့သူ။
ပန်းနွယ်ကစိမ်းအမြင်အာရုံဝေဝါးလာခြင်း၊ စကားပြောဗလုံးဗထွေး ဖြစ်လာခြင်း၊ အသက်ရူကြပ်လာခြင်းနဲ့ ထုံထိုင်းသွားခြင်းတို့ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သန်းအထိ ဖြစ်ပွားနေပြီး လူသေဆုံးမှုက ၂ သောင်းခန့်ကနေ ၉ သောင်း ၄ ထောင်ခန့် အထိသေဆုံးမှု ဖြစ်နေအဆိပ်ရှိမြွေများ ကိုက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ဒဏ်ရာတွေဟာ သာမန် ဒဏ်ရာလေးက စလို့ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးသည် အထိ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မြွေဆိပ်တက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ဝေဒနာတွေနဲ့ လက္ခဏာတွေကို အမျိုးအခြားခွဲရရင်တော့ပါတယ်။ မြွေကိုက်မှု ဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာများဟာ အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းဒေသများနဲ့ လယ်ယာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ နေရာတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ကို ကြောက်တာထက် သူတို့က သင့်ကို ပိုကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ အရှေ့တောင် အာရှမှာ အတွေ့ရများတဲ့ တောမြွေပွေးတစ်ချို့နဲ့ မြွေဟောက်တစ်ချို့ ကိုက်ခံရတဲ့ အခါ ဒဏ်ရာတွေ က နာကျင်လာပြီး ပြင်းထန်စွာ ရောင်ကိုင်းနိုင်ကာ သွေးထွက်ပြီး အရည်ကြည်ဖု တွေ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။လေတိုက်တိုင်းယိမ်း။
တိတ်တိတ်လေးဆွေးတစ်ချို့သော မြွေဟောက်များရဲ့ အဆိပ်က အကိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာနားက တစ်ရှုးတွေကို ပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။ကြီးမြွေဟောက် နဲ့ အာဖရိကတိုက် မမ်ဗာ မြွေတွကလွဲပြီး မြွေတော်တော်များများက လူတွေကိုကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီမြွေ ၂ မျိုးကတော့ လူမြင်ပြီဆိုတာနဲ့ လိုက်လံတိုက်ခိုက်တတ်ကြတဲ့ မြွေမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။မွမျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အနက် ၄၀၀ ခန့်သာ အဆိပ်ရှိကြပြီး မြွေအများစုက သားကောင်တွေကို ဖိအားနဲ့ ညှစ်ကာ ဖမ်းဆီးကြလေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့သောမြွေတွေကတော့ သားကောင်ကို သွားနဲ့ ကိုက်ကာ ဖမ်းဆီးတတ်ကြပြီး ဒီအတိုင်း မြိုချစားသုံးတတ်ကြပါတယ်။စလို့ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးသည် အထိ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မြွေဆိပ်တက်ရင် ဖြစ်လာမယ့် ဝေဒနာတွေနဲ့ လက္ခဏာတွေကို အမျိုးအဆိပ်များက အဆိပ်ဂလင်းမှ မြွေစွယ်သို့ရောက်သွားပြီး အဲ့ကမှ တစ်ဆင့် သားကောင်ကိုယ်ထဲသို့ ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြွေဆိပ်တွေဟာ ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးမျိုး ပေါင်းစည်းထားတဲ့မင်းခွှု့်လွှတ်နိုင်မလား။
beautiful good-karma esteem
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by btcpmking from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.